Ukuqoqwa kwezinsiza ezincane ezenziwe ukuklwebheka okuthile ...
[I-Action5] iyithuluzi elingenalutho lokuthola amafayela aguquliwe ngokusebenzisa amasheke kumkhombandlela. Kunamathuluzi we-gazillion enza lokhu, ngakho-ke anginasiqiniseko (khumbula) ukuthi kungani ngilibhalile.
phinda ubuyise ifolda, ulahle umuthi wamasheke (inkomba) ..
..phinda ubone ukuthi yini eshintshile
Iphuzu elisemqoka lawa mathuluzi ukuthi imiyalo nje yeShell, ngakho-ke ungangena kunoma imuphi umyalo wokuhlola ongawukhetha, ngokuzenzakalela uwusebenzisamd5.
Inhloso ye- ama-bashutils ukuthembela kakhulu ku-bash ukwenza imisebenzi ethile kuzinqubo.
Kufundwa ifayili ngaphakathi kokuguquguqukayo (gobbler ), kudinga ukuqiniseka ukuthi ifayili alinawo ama-nulls, ngakho-ke kufanele ligcinwe ngefomethi yokufaka ikhodi yamahhala. Qaphela: ukusetshenziswa ngokunganaki kwama-quotes ku-bash, (ezindaweni lapho kungadingeki khona) kungadala inkumbulo eningi ukuba ichithwe.
Ukuqapha i-cpu ohlelweni lwe-linux, kudinga ukufundwa/proc misa isikhashana ngaphandle kwemfoloko, futhi ubale izibalo ngokusebenza kwegobolondo nje ($(()))
Ukukhawulela inqubo kudinga ukuthumela ngokuqhubekayoSIGSTOP futhiSIGSTOP amasiginali, lokhu kuhamba kancane ku-bash :) ngoba kuyiluphu, futhi isoftware ingahle iziphathe ngokungalindelekile lapho imiswa njalo iphinde iqale kabusha, ngoba ama-programmers awavamile ukulindela ukuthi isoftware yawo isebenze ngezikhathi ezithile!
A ukwakha iskripthi ngoba umabhebhana , ithuluzi elihle kakhulu lokudlulisela phambili ukuxhumana, alisindi, futhi ukuba nohlobo oluxhunywe ngokwezibalo kuyasiza kakhulu.
Thumela Amathegi: amathuluzi, mayelana
Ephreli 08, 2021